သိချင် လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
August 2010 edited January 2011 in About Forum
MZ မှ မင်္ဂလာ ရှိသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ ရွှေညီအစ်ကိုများ ပညာရှင်များခင်ဗျား
သိချင်တာလေးတွေ မေးချင်လို့ပါ။ မသိလို့ မေးတာပါ။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ MZ Member တွေကို မွေးစအရွယ်၊ လေးဖက်ထောက်အရွယ်၊ ဆယ်ကျော်သက်၊ ဂုရု၊ စွမ်းအားပြည့်ပညာရှင် အစရှိသဖြင့် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးတာလဲခင်ဗျာ ဘယ်သူတွေက သတ်မှတ်ပေးပါသလဲ နောက်ပြီး MZ ကိုဘယ်သူတွေက တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာလဲ အဲဒါလေးတွေ သိချင်လို့ပါ။
ညီငယ် လူမာန်ဦး (lumanoo)
P.S အြကြုံလို့ မေးလိုက်အုံးမယ် "တ" ကို အောက်ကနေ ထပ်ဆင့် ရိုက်ရန် Alt + 0229 မရပါ။ ဥပမာ ခေတ ပူတာအို မှာ မရပါ။ အသိပညာတိုးချင်လို့ပါ။
post count ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သတ်မှတ်သွားတာပါ။ post count များလာလေလေ အသက်လည်း တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါတယ်။
MZ ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် Apirl လက စပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
Zawgyi မှာဆိုရင် `+w နှိပ်မှ ခေတ္တမှာ --္တ ပေါ်မှာပါ။
အဲ့ဒါနဲ့မပေါ်ရင်တော့ Ctrl+Alt+W ပေါင်းနှိပ်လိုက်ပါ... ရပါလိမ့်မယ်..
MZ မှ အစ်ကိုအစ်မများ ရောင်းရင်းမိတ်ဆွေများ အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များ
M.Z မှ Member များကို မွေးစအရွယ်၊ ကလေး၊ လူငယ် ၊လေးဖက်ထောက်အရွယ် အစရှိသဖြင့် ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးပါသလဲ? မသိလို့မေးတာပါ။ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ M.Z ကို သူငယ်ခြင်း တစ်ယောက်ရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကြောင့် သိရှိရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး M.Z ကို ဘယ်သူတွေက ဦးစီးပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသလဲ?
P.S အဲကြုံလို့ မေးရဦးမယ် M.Z Post New Thread မှာ "တ" ကို အောက်က လုံးဆင်.ကို Alt + 0229 ဖြင့်မရပါ။
ဥပမာ ခေတ ပူတာအို
@ lumanoo Thread ၂ ခု ထပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီမေးခွန်းကို အရင်တခုမှာ ကိုစေတန်နဲ့ ကို T K နဲ့ဖြေထားပြီးပါပီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Forum Section မှားသွားလို့ပါ။
အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ် ကိုစေတန်နှင့် ကို t.k
Post နှစ်ခုပေါင်းပြီး Ask about forum အောက်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်
post 30 ရေးရင် လေးဖက်ထောက်အရွယ်ရောက်တယ်လို့တော့သိတယ်
လေးဖက်ထောက်ကတော့ နားထောင်လို့မကောင်းဘူး ဟိ တမျိုးကြီးပဲ
post 60 ရေးရင် ဆယ်ကျော်သက်ပေါ့
ဟုတ်၀ူးဂျ... သူက Post တစ်ရာကို rank တစ်ခုထားတယ်.
0 to 100 က လေးဖက်ထောက်အရွယ်
100 to 200 က ကလေး
200 to 300 က လူငယ် .. အဲ့လို အဲ့လို ခွဲထားတာ ..
သူပြောမှဖြင့် ကျွန်တော်တောင်လေးဖက်ထောက်နေရတာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာပြီ ....
မက်တက်လေးထရပ် ရအောင် ကိုစေတန်ကြီးကို မုန့်သွားကျွေးအုံးမှ
အယ်ဟုတ်ပေါင်မှားလို့ ပို့စ်များများတင်အုံးမှလို့ ပြောတာ .....
နောက်တာနော် ...တခြားရည်ရွယ်ချက်မပါ ပါဘူးခင်ဗျာ
T.K ပြောသလို သာဆို သားသား တစ်သက်လုံး ' မွေးစကလေး ' ကတက်တော့ ၀ူးထင်ပါတယ်.....အ..ဟီး...အ..ဟီးးးးးးးးး
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးလာတာ နောက်ဆုံးမှာ စွမ်းအားပြည့်ပညာရှင်တို့ ရှေးလွန်ပညာရှင်တို့ အစား သေခါနီးတို့ အိုမင်းရွတ်တွတို့ ဆို ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်ဗျ